I-PAM izoba ekuqaleni ephepheni lokuvota – LIVE Express
Iqembu lezepolitiki, i-Pan Africanist Movement (PAM) yilona elizohola amanye amaqembu phambili njengoba selikhethwe ukuba libe sekuqaleni ohlwini lwamaqembu azotholakala ephepheni lokuvota, (ballot paper) mhla zintathu ku-August 2016
Leli qembu libe senhlanhleni yokuthi kutonyulwe igama lalo phakathi kwamagama amaqembu angama-204 angenele ukhetho.
Lokhu kusho ukuthi kubo bonke omasipala lapho i-PAM izongenela khona ukhetho kuzoba iyona igama layo elizoba sekuqaleni.
Amanye amaqembu azolandelana ngokwezinhlamvu zokuqala emagameni awo (alphabetical order).
Ngokusho kwe-Vice Chairperson ye-Independent Electoral Commission (IEC), u-Terry Tselane, uthi sekuwumkhuba omdala ukuthi kutonyulwe noma yiliphi iqembu elizoba sekuqaleni kwi-ballot paper nokuyinto esiyenziwe iminyaka engama-22 uma kuwukhetho.
Uqhube wathi lolu hlelo lunobulungiswa kanti futhi umkhumba owenziwayo nakwamanye amazwe.
UBaxter usememezele isikwati seBafana esizodlala koweBurkina Faso